Meelo kala gadisan ee magaalada
Barta ay kaga taal dalka
1,830.92 Km2 (706.9 Mayl laba jibaaran)
6,211 Qof/km2 (16,086.4 Qof/Mayl iskuwareeg) Qiyaas (Sanadkii ??)
34010 Xataa 34850
iyo 80000 Xataa 81800
(+90) 212 (dhanka yurubta)
(+90) 216 (dhanka aasiya)
Bogga Dawladda hoose ee istambuul
Istanbuulw:tr:istanbul Turkey (Af-Turki: İstanbul; Af-Carabi: إسطنبول; looqu dhawaaqo: /tænˈbuːl/ ama /tɑːnˈbuːl/; [isˈtanbuɫ] ( dhageeyso)), waayihii hore loo yaqaanay Konstantinoble iyo Byzantiyam, waa caasimad ka mid ah deegaanada ugu dadka badan wadanka Turkeyga. Sidoo kale, caasimadani waa xarunta ugu weyn ee ganacsiga, dhaqaalada, dhaqanka, diinta iyo taariikhda wadankaasi.
Caasimada Istanbuul waa magaalada keli ah ee dhacda qaarada Aasiya iyo Yurub; waxayna dhinaca ku haysaa dhowr badood oo kala duwan, sida Bada Madoow iyo Bada Marmara.Xarumaha dhaqaalaha iyo dhismayaasha taariikhiga ah ee caasimada Istanbuul waxay ku yaalaan dhinaca Yurub, halka sadex meelood (75%) bulshadu ku dhaqan tahay dhinaca Aasiya.
Guud ahaa, caasimada Istanbuul iyo Gobolka Istanbuul waxaa ku dhaqan dad gaadhaya ilaa 14 milyan. Markay taariikhdu ahayd qiyaastii 660 C.H (Ciise Hortii) ayaa deegaanka Sayburna laga aasaasay caasimadii Byzantium taasi oo maanta ah Istanbuulta aan naqaano.
3.1 Sidoo Kale Fiiri
Istanbuul waa caasimada labaad ee wadanka Turki, waana magaaladda ugu weyn wadankaas, waxay ka kooban tahay labo daamood oo ku kala yaala Yurub iy Aasiya waa magaalo aad u qurux badan aadna caan ugu ah ganacsiga, dhaqaalah iyo dalxiiska waxaa ku nool in ka badan 13 milyan oo qof taas oo ka dhigaysa magaalada ugu dadka badan Turkiga iyo guud ahaan Yurub.
Laba Rayaale weyn ee taariikhda ay ahayd xarunta of Istanbul iyo laba diinta quduuska ah. The raad haray ee la soo dhaafay, inkastoo guud ahaan is ogow in la ilaaliyo dhiseyso ku cad, waxa loo arki karaa magaaladii ku wareegsan. Istanbuul, labada Islam iyo Orthodox Masiixiyada waa ciidankii u macbudyo ugu muhiimsan. Dhismaha ugu caansan ee magaalada ku yaalla oo u dhexeeya indhaha of Istanbul jira masaafad socod wada. Waxay abuurtaa xuduudaha u saarney taariikhiga ah ee Istanbul yeedhay Byzantium. Kaliga galeen magaaladii on xaflad soo dhaweyn weyn faras oo booqday Sophia Hagia ah. Ka dib markii uu stop ugu horeysay ee magaalada sida caado waxaa hadhay sidii Sophia Hagia ah.
Farasmagaalka caasimada Istanbuul
Muuqalka Istanbuul wakhtiyo kala duwan